I-Best BeebeeRun 2 In 1 Game Fishing for Kids, Wooden Magnetic Fishing Toys Umbala Wokuhlunga Umbala Ukubala Amathoyizi Amamathoyizi eMontessori Imfundo Amathoyizi 3 4 5 Amantombazane Amantombazane Amadala Abafana Izingane Umkhiqizi kanye neFektri | Ukudla
BeebeeRun 2 In 1 Ukudoba Game for Kids, Ngokhuni Magnetic Ukudoba Amathoyizi Umbala Ukuhlunga Inombolo Ukubala Math Amathoyizi Montessori Education Amathoyizi 3 4 5 Unyaka Amantombazane Old Boys Boys Izingane
I-Magnetic Fishing Game: La mathoyizi we-Math eza nezinhlanzi ezingama-25 eziphrintiwe ngezinombolo ezisuka ku-1 kuye ku-20 no-5 uphawu lokusebenza "+ - × ÷ =", izinti ezingama-50, ezilungele ukuhlonza inombolo nezinqubo ezilula zezibalo.
Ithoyizi Eliphephile Lezinkuni: Zonke izinto ezenziwe ngokhuni zenziwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme, ezingenabuthi futhi ngaphandle komphetho obukhali, ezigqokiwe ngopende osuselwe kwezemvelo, ogcina izingane ziphephile ngesikhathi semisebenzi yokufunda encane.
Amathoyizi aseMontessori Wezingane: Ngesigxobo sezinhlanzi, izingane zizolanda izinhlanzi ezinomazibuthe emlonyeni wenhlanzi. Ngaphandle kwalokho, encane isebenzisa uqinisa ukubamba izinhlanzi, amathoyizi amahle okufundisa ukwakha isandla iso ukuhlobana, emihle motor amakhono kanye dexterity.
Ukuhlunga Umbala Amathoyizi Wezingane: Zonke izinhlanzi nezinti zezinkuni zinemibala egqamile ehlukile. Ukubamba izinhlanzi bese uqhathanisa umbala kusiza ingane encane ukuba ithuthukise ukuqashelwa kombala isencane. Amathoyizi amahle okufundela izingane ezineminyaka engu-2 3 4 5 6 ubudala.
Izipho Ezinkulu: Magnetic Wooden Fishing Game yesikole sasekhaya noma izinto zokufundisa zasekilasini. Kungenxa yabantwana abancane benza isipho esihle sezinsuku zokuzalwa, amaholide, uKhisimusi, noma imicimbi ekhethekile.
25.65 x 19.05 x 5.59 cm; 720 Amagremu
Ukudlala kungukukhonjiswa kwemizwa yengane ngayinye. Ibhokisi lokufunda lokudoba elenza imisebenzi eminingi livumela izingane ukuthi zisebenzise izandla nobuchopho, zikhuthaze amandla azo, zibone kalula izinombolo zombala nokusebenza okulula kwezibalo, futhi zihlakulele amakhono emoto nokuxhumana ngesandla.
Imidlalo yamagnetic yokudoba ngokhuni esetshenziswa njengezinto zokufundisa ezikoleni noma emakilasini yizipho ezinhle zezinsuku zokuzalwa zezingane, amaholide, uKhisimusi noma imicimbi ekhethekile.
Ukusetshenziswa kopende wokuphepha kunika izinhlanzi zekhathuni imibala egqamile futhi egqamile, engagcini nje ngokuheha ukunaka kwezingane, kepha futhi ifunda ukubona imibala eminingi;
Kunezimpawu zezinombolo ngemuva kwenhlanzi ngayinye, futhi induku yokubala isiza izingane ukuba zibone izinombolo futhi zihlakulele ikhono lezibalo;
Induku yokudoba nezinhlanzi ezincane zihlonyelwe odonsa abanamandla, okungelula ukuwa futhi abangabamba kalula izinhlanzi ezincane. Ungasebenzisa futhi udlawana ukubamba izinhlanzi ezincane ukuqinisa ukunyakaza kwesandla kwengane nokuhlangana kwamehlo;
Izinkuni ezisezingeni eliphakeme, ezicwebezelwe ngokucophelela, ezinemiphetho ebushelelezi, ehlala isikhathi eside futhi edlalayo, ungakhathazeki ngokuthi ingane yakho ilinyazwe ama-burrs;
Ifakwe ibhokisi lokhuni ukukhumbuza umntanakho ukuthi alibeke ngesikhathi ngemuva kokudlala, futhi uhlakulele umkhuba omuhle wokuzinakekela kusukela ebuntwaneni;
Yize ukudoba kubonakala kulula, empeleni, njalo lapho ukudoba kuvivinya ukugxila, kungahlakulela ukubekezela kwezingane kahle;
Langaphambilini Ukukhipha Amathoyizi Okukhuphuka Wengane Yezingane 4 ku-1 Playset Yezingane Ezidlala Amaslayidi Wezingane Zangaphakathi Nangaphandle Kwezingilazi ZaseJungle Umsebenzi Wendawo Yokudlala Ijimu Yamagceke Ezingane Ezineminyaka Engu-3-5
Olandelayo: I-Arkmiido Baby Play Mat, i-XPE egoqekayo ye-Mat yaphansi, i-Extra Thick 1cm, Ubufakazi bamanzi neSoft for Toddler. (180cm200cm) (Luhlaza okwesibhakabhaka)
BeebeeRun Car Toy Setha Cargo Plane nge 4 Fire F ...
Ukwakhiwa Toys Setha Ezokuthutha Cargo Airp ...
Dinosaur Amathoyizi Foam Dart Gun Tyrannosaurus Rex R ...
Izimoto ezingama-27 ku-1 zezimoto zokwakha izingane iT ...
I-BeebeeRun Toddlers Musical Instruments, Ngokhuni ...
Amaphakethe we-LBLA 4 Ngokhuni Izilwane Zasolwandle Amathoyizi Woo ...